Igosa likaSolgard yi-RPG esekwe ekujikeni evela kubenzi beCandy Crush Saga | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UKumkani usizisela into entsha: Intsomi kaSolgard, i-RPG eyenzelwe kakuhle yokujika
UKumkani uye wasebenzisa iCandy Crush Saga, kodwa ngeli xesha Isothusa ngokwenene ngeLegend of Solgard, i-RPG apho kuya kufuneka sidibanise amajoni ahlukeneyo kunye nabenzi bemilingo ukuphelisa utshaba olusemsebenzini olufuna ukuba singaqhubeki nenkqubela yethu.
Kukulo makhenikhi womdlalo lowo Igqala likaSolgard limile ukuze lisidlale kumdlalo wokudlala indima, njengale, apho kufuneka siqokelelele izidalwa ezingaphezulu ukuze siphonononge imihlaba kaSolgard kwaye sifumane iimfihlo zentsomi yaseNorse.
1 RPG ixesha elungileyo
2 Guqula iqhawe lakho kwiLegend of Solgard
3 I-freemium RPG evela ku-KING ukonwabela
RPG ixesha elungileyo
UKUMKANI luphononongo olwahlukileyo ubuhle kubugcisa, kwaye kwiLegend of Solgard uzivumela akhanye ukusibonisa umdlalo ogqitywe kakuhle kakhulu nothotho lwezibane kwicandelo elibonakalayo. Apha bayayazi indlela yokudlala amakhadi abo kakuhle, kwaye ngakumbi xa siqhubeka naleyo yokudibanisa imikhosi enobuhlobo yeklasi enye ukuze bathathe inkalipho ngakumbi bajongane notshaba.
Oko kukuthi, umdlalo weqonga usekwe ekuhambeni ukudibanisa imikhosi eyahlukeneyo Esibeka kwitafile yomdlalo ukuze zongeze amanqaku kwaye zikrobe inani elikhulu lobomi kwiintshaba. Njengoko siqhubela phambili kumanqanaba abanzi, sinokuhambisa izidalwa ezininzi ukuzidibanisa kwi-cocktail ebaluleke kakhulu ehlala inika iziphumo ezilungileyo ngokubonakalayo.
Njengoko sisebenzisa izidalwa zethu namajoni, kufuneka zityhila ngakumbi ukuzidibanisa kwaye ke ufumane eyona ndlela ifanelekileyo yokugqiba inqanaba kwangoko. Ukudityaniswa kwezidalwa kuya kuba nzima ngakumbi njengoko siqhubela phambili kwaye sinokuvula izakhono ezahlukeneyo njengokukhupha enye kumqolo ukuze zonke izidalwa zigqitywe.
Guqula iqhawe lakho kwiLegend of Solgard
Ngaphandle kokuqokelela ezinye izidalwa njengoko siqhubela phambili kwinqanaba, sinako guquka iqhawe lethu ukuze limnike amandla kaThixo. Oku kuyakusinceda ukuba sijongane nabaphathi bamanqanaba aphezulu kunye nobukhulu, ngelixa kuyakufuneka sisuse iiproteni zabo abazakuzama ukwenza izinto zibe nzima kuthi.
Kwimbali kaSolgard nayo Sinokhetho lokwenza nokujoyina imibutho ukufikelela kwimishini ekhethekileyo njengokujongana nabaphathi abanamandla bombutho. Imowudi ye-PvP ibandakanyiwe ukuvavanya izakhono esizifundileyo kwaye ngenxa yoko sijongane nabanye abadlali kwi-Arena of Heroes.
Ngamanye amagama, iNqaku likaSolgard lisinika i Iindidi ezilungileyo zeendlela zemidlalo Abo bajongana nabo ukuba babe nomdlalo weeveki ezimbalwa ukuba sifumene. Lo ngumdlalo we-freemium oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ulinde ukudlala ukuba uwasebenzisile onke amanqaku wamandla. Icala elinye, nangona besingenakulindela enye into komnye wookumkani be-fremium njengo-KING.
I-freemium RPG evela ku-KING ukonwabela
Kwaye ukuba nale nto isetafileni sele sikwazi oko sichasene nako. A freemium kubume kwaye oko kusindisa oomatshini abakhobokisa kakhulu. Ukuba sidibanisa nezinto ezahlukeneyo zezidalwa kunye noluhlu olukhulu lwamanqanaba aya kongezwa ngakumbi kuhlaziyo olulandelayo, sijamelene nomnye wemidlalo apho sinokuchitha khona ixesha lethu lokuzonwabisa ukuze siqhubeke siphucula iqhawe lethu okanye senze Inzala enkulu.
Ngokumalunga necandelo lobugcisa, iNqaku leSolgard iyahambelana ngokupheleleyo noko sinokulindela ukusuka kumdlalo weKumkani. Kubetha isandi seziphumo kwaye ikunika njani oko emfazweni. Oopopayi beentshukumo kunye nohlaselo nabo balungelelaniswe kakuhle, kunye nabalinganiswa abohlukeneyo kunye nayo yonke indawo ekubonisa kuyo kumdlalo okude kwabanye abaninzi kwi-KING.
Iyaxabiseka loo nto UKUMKANI ubheje kwinto eyahlukileyo kwaye usizise kwiNqaku le-Android likaSolgard, i-RPG yokulwa esekwe ekujikeni eya kuthi ikunike ixesha elininzi lokuzonwabisa kunye nolonwabo ngokuyifaka simahla kwifowuni yakho ye-Android.
Uluhlu olubanzi lomxholo kunye neemowudi zomdlalo
Olu ayilohlobo lweCrush Soda
Ufuna amandla ukuze udlale
Umthuthukisi: Izikhuseli zeqhwa ze-AB
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » UKumkani usizisela into entsha: Intsomi kaSolgard, i-RPG eyenzelwe kakuhle yokujika
Imidlalo ye-Android yeNkulumbuso efanele ukukhutshelwa